4G Orange any Mahajanga : manampy sy manafaingana ny asan’ny mpandraharaha | NewsMada
4G Orange any Mahajanga : manampy sy manafaingana ny asan’ny mpandraharaha
Malaza i Mahajanaga sy ny farira Boeny ankapobeny amin’izao fotoana izao eo amin’ny fizahantany ; eo koa ny seranan-tsambo lehibe ao aminy sady manomboka miverina tsikelikely any an-toerana, ankehitriny, ny indostria. Koa miara-miasa akaiky amin’ny mpitantana ao amin’ny faritra ny fitondram-panjakana hametraka an’i Mahajanga ho tanàna fitaratra eo amin’ny fampandrosoana. Maro ireo tetikasa voafaritra, anisan’izany ny fiverenana amin’ny famokarana simenitra, fanamboarana fotodrafitrasa samihafa, fametrahana teknolojia vaovao.
Noho izany antony rehetra izany, hanome hery ny toekarena, napetraka any Mahajanga, ny 19 oktobra teo, ny tambanjotra 4G Orange. Nanokatra izany ny minisitry ny Fifandraisan-davitra, Rakotomamonjy Neypatraiky André, ny tale jeneralin’ny Orange, Michel Degland, notronin’ireo tompon’andraikitra samihafa any an-toerana. Manampy betsaka ny mpandraharaha ao amin’ny faritra ny fisian’io 4G Orange io, hanatsarana ny fomba fiasa hiatrehana ny fifaninanana. Manamora ny fifandraisana ny 4G Orange eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Tombony lehibe izany, indrindra ho an’ireo miasa momba ny fizahantany.
« Tsy azo ihodivirana ho an’ny asa fampandrosoana ny fifandraisan-davitra sy ny teknolojia vaovao miaraka aminy, manohana ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana », hoy ny minisitra Rakotomamonjy Neypatraiky André. « Tsy manavaka olona ny nomerika ary manao izay tandrify azy ny minisitera mba hahazo tombontsoa amin’izany ny rehetra », hoy ihany ny minisitra. Nanamafy ny tale jeneralin’ny Orange nilaza fa hery lehibe ho azy ireo ny kalitaon’ny tolotra ao aminy hanolorana vahaolana ho an’ny tsaratsara kokoa hatrany.
Mandray haba amin’ny « mobile money »
Nanatrika izany fotoana izany ireo mpandraharaha isan-tsokajiny, fotoana nandraisan’ny Orange Madagascar mivantana ny hetahetan’izy ireo. Endrika iray ho fanohanana ny asan’izy ireo izany sy hahafahana mitady vahaolana hanatsarana hatrany ny kalitaon’ny asa. Iantohan’ny minisitera kosa ny fampifandraisana ny tambajotra, biraon’ny fokontany rehetra amin’ny biraon’ny ben’ny Tanànan’i Mahajanga. Efa noderain’ny Banky iraisam-pirenena ny ezaka ataon’ny tanànan’i Mahajanga momba ny fandraisana haba amin’ny alalan’ny « mobile money ».